နှိပ်စက်လွန်းတဲ့ခင်ပွန်းကိုလက်စားချေဖို့ အမြွာသားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုသတ်သေဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီ - Mckzone Daily
နှိပ်စက်လွန်းတဲ့ခင်ပွန်းကိုလက်စားချေဖို့ အမြွာသားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုသတ်သေဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊ Kupang မြို့က အသက် 24နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာ သူမကိုအမြဲအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လက်စားချေဖို့ အမြွာသားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ကာ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသတ်သေဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ် ။ Dewi Regina Ano အမည်ရှိတဲ့အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ သူမ၏ဝမ်းဗိုက်ကို ကိုယ်တိုင်ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ပြီး သူမ၏လည်မျို ကိုလည်း ဓားရှည်ဖြင့်လှီးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း သေကံမရောက်ဘဲ သတိလစ်မေ့မျောစေခဲ့တဲ့အထိသာဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိစေခဲ့ပါတယ် ။ သေတော့မည့်လိုလိုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Dewi ကို ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ သားအမြွာနှစ်ယောက်ဘေးအနားမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ ။ Angga Masus နှင့် Angkri Masus အမည်ရှိတဲ့အမြွာသားနှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ 5ရက်နေ့မှာ အဆိုပါအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။
အစပိုင်းမှာတော့ ရဲအရာရှိများဟာ မိခင် နှင့် ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည်ဟု ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Dewi ဆေးရုံတက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူမ၏သားနှစ်ယောက်ကိုသူမကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲအရာရှိထံဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ရဲအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရ. Dewi ဟာသူမကိုအမြဲမသိကျေးကျွန်ပြုပြီး အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လက်စားချေဖို့်အတွက် သားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ” သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့လိုအပ်ချက် ဆန္ဒတွေကိုတစ်ခါမှ မဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အပြင် သူတို့၏သားနှစ်ယောက်ကိုလည်း လုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ကြောင်း ” ရဲအရာရှိက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် ။
ထို့အပြင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကိုဈေးသုံးဖို့အတွက် ပိုက်ဆံများမပေးသည့်အပြင် ၊ လတိုင်း အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်ဝယ်ဖို့ကိုပါ မပေးခဲ့တဲ့အတွက် Dewi ဟာအတော်လေးကို အဆင်မပြေခဲ့ပဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ် ။ရဲအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရ Dewi ဟာသူမခင်ပွန်းအပေါ် မနာလိုမုန်းတီးစိတ်အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက် သူမ၏ကလေးကို ကိုယ်တိုင်သတ်ပစ်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Dewi မေးခွန်းများမေးမြန်းပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမဟာလုံးဝမရပ်နားနိုင်အောင်ငိုကြွေးခဲ့ပြီး သူမ၏အပြစ်အတွက် အသနားတောင်းခံခဲ့ပါတယ် ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ၊ Kupang မွို့က အသကျ 24နှဈအရှယျအမြိုးသမီးဟာ သူမကိုအမွဲအနိုငျကငျြ့နှိပျစကျခဲ့တဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူကို လကျစားခဖြေို့ အမွှာသားနှဈယောကျကိုသတျကာ မိမိကိုယျတိုငျလညျးသတျသဖေို့ကွံစညျခဲ့ပါတယျ ။ Dewi Regina Ano အမညျရှိတဲ့အဆိုပါအမြိုးသမီးဟာ သူမ၏ဝမျးဗိုကျကို ကိုယျတိုငျဓားဖွငျ့ထိုးခဲ့ပွီး သူမ၏လညျမြို ကိုလညျး ဓားရှညျဖွငျ့လှီးဖွတျခဲ့ပမေဲ့လညျး သကေံမရောကျဘဲ သတိလဈမမြေ့ောစခေဲ့တဲ့အထိသာဒဏျရာပွငျးပွငျးထနျထနျရရှိစခေဲ့ပါတယျ ။ သတေော့မညျ့လိုလိုဖွဈနခေဲ့တဲ့ Dewi ကို ဟိုတယျခနျးထဲမှာရှိနတေဲ့သဆေုံးသှားပွီဖွဈတဲ့ သားအမွှာနှဈယောကျဘေးအနားမှာတှရှေိ့ခဲ့တာပါ ။ Angga Masus နှငျ့ Angkri Masus အမညျရှိတဲ့အမွှာသားနှဈယောကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့စကျတငျဘာလ 5ရကျနမှေ့ာ အဆိုပါအခငျးဖွဈပှားရာနရောမှာပဲ သဆေုံးသှားခဲ့ရပါတယျ ။
အစပိုငျးမှာတော့ ရဲအရာရှိမြားဟာ မိခငျ နှငျ့ ကလေးနှဈယောကျဟာ တဈစုံတဈယောကျ၏တိုကျခိုကျခွငျးခံရသညျဟု ထငျခဲ့ပမေဲ့လညျး Dewi ဆေးရုံတကျပွီးရကျအနညျးငယျအကွာမှာတော့ သူမ၏သားနှဈယောကျကိုသူမကိုယျတိုငျသတျဖွတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ရဲအရာရှိထံဝနျခံထှကျဆိုခဲ့ပါတယျ ။ ရဲအရာရှိတှရေဲ့ပွောဆိုခကျြအရ. Dewi ဟာသူမကိုအမွဲမသိကြေးကြှနျပွုပွီး အနိုငျကငျြ့နှိပျစကျခဲ့တဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူကို လကျစားခဖြေိျု့အတှကျ သားနှဈယောကျကိုသတျပဈခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။ ” သူမရဲ့ခငျပှနျးဟာ ဇနီးဖွဈသူရဲ့လိုအပျခကျြ ဆန်ဒတှကေိုတဈခါမှ မဖွညျ့ဆညျးပေးသညျ့အပွငျ သူတို့၏သားနှဈယောကျကိုလညျး လုံးဝဂရုမစိုကျခဲ့ကွောငျး ” ရဲအရာရှိက ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ ။
ထို့အပွငျ ခငျပှနျးဖွဈသူက သူမကိုဈေးသုံးဖို့အတှကျ ပိုကျဆံမြားမပေးသညျ့အပွငျ ၊ လတိုငျး အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျဝယျဖို့ကိုပါ မပေးခဲ့တဲ့အတှကျ Dewi ဟာအတျောလေးကို အဆငျမပွခေဲ့ပဲ ဒုက်ခရောကျခဲ့ရကွောငျးသိရှိရပါတယျ ။ရဲအရာရှိတှရေဲ့ပွောဆိုခကျြအရ Dewi ဟာသူမခငျပှနျးအပျေါ မနာလိုမုနျးတီးစိတျအလှနျပွငျးထနျခဲ့တဲ့အတှကျ သူမ၏ကလေးကို ကိုယျတိုငျသတျပဈခဲ့မိခွငျးဖွဈပါတယျ ။ Dewi မေးခှနျးမြားမေးမွနျးပွီး စဈဆေးမေးမွနျးတဲ့အခြိနျမှာတော့ သူမဟာလုံးဝမရပျနားနိုငျအောငျငိုကွှေးခဲ့ပွီး သူမ၏အပွဈအတှကျ အသနားတောငျးခံခဲ့ပါတယျ ။
Be the first to comment on "နှိပ်စက်လွန်းတဲ့ခင်ပွန်းကိုလက်စားချေဖို့ အမြွာသားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုသတ်သေဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီ"